Raw Trastuzumab (180288-69-1) HPLC ≥98% | AASraw
/ Products / Ny hafa / Trastuzumab (180288-69-1)
SKU: 180288-69-1. Sokajy: Ny hafa
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram ka hatramin'ny filaharan'ny Trastuzumab (CAS 180288-69-1), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Trastuzumab vovoka dia ampiasaina amin'ny fikarakarana ny voan'ny kanseran'ny HER2. Ny herim-pamindrana proteinina HER2 dia hita ao amin'ny 25% -30% ny kanseran'ny tratra voalohany.Trastuzumab dia naseho, tamin'ny fandinihan'ny in vitro sy ny biby, mba hampihenana ny fatran'ny tumorcells amin'ny olombelona izay manandratra ny HER2.
Trastuzumab karazana fototra
Meny fitetezana 298.25536
Trastuzumab (180288-69-1) fampiasana amin'ny tsingerim-pandaminana
Trastuzumab (CAS 180288-69-1), ny anaran'ny mpivarotra dia Herceptin.
Trastuzumab dia omena amin'ny alalan'ny fampidiran-tsiriry ao anaty vina (intravenous, IV). Ny doka voalohany dia omena amin'ny 90 minitra. Raha toa ka omena mihoatra ny 30 isa-minitra ny dipoavatra azo antoka.
Ny habetsahan'ny Trastuzumab (180288-69-1) izay azonao dia miankina amin'ny antony maro, anisan'izany ny halavanao sy ny lanjanao, ny fahasalamanao amin'ny ankapobeny na ny olana hafa momba ny fahasalamana, ary ny karazana kansera na fahasalamana atrehina. Ny mpitsabo anao no hamaritra ny dosinao sy ny fandaharam-potoanao.
Fampitandremana amin'ny Trastuzumab
Ny voka-dratsin'ny trastuzumab dia mety hanelingelina ny fihoaran'ny fo. Ny fiantraikan'ny aretim-po (ny tsy fahombiazan'ny fo) dia mitombo amin'ny olona manana aretim-po na zavatra hafa mety hampidi-doza toy ny taratra amin'ny tratra, fandrosoana taona, ary fampiasa zava-mahadomelina hafa (toy ny doxorubicin sy cyclophosphamide). Ny dokotera dia afaka manamarina ny fonosinao alohan'ny ahafahanao mandray Trastuzumab ary hanara-maso akaiky ny fonao mandritra ny fitsaboana anao. Trastuzumab (180288-69-1) dia mety hijanona raha toa ka miseho ny tsy fahampiana aretim-po.
Ny antikoly monoclonal dia karazana "fitsaboana" voan'ny kansera. Ny antikôlôjia dia ampahany amin'ny rafitra fiarovana. Amin'ny ankapobeny, ny vatana dia mamorona antikora ho valin'ny antigen (toy ny proteinina amin'ny mikraoba) miditra amin'ny vatana. Ny antikoly dia mametraka ny antigène mba hanamarihana izany ho an'ny fandringanana amin'ny rafi-kibon'ny fiasan'ny vatana. Ao amin'ny laboratoire, ny mpahay siansa dia mandinika ny antigène manokana amin'ny sela homamiadana (lasibatra) mba hamaritana proteinina iray mifanaraka amin'ny antigène. Avy eo, amin'ny fampiasana proteinina biby sy olombelona, ​​ny mpahay siansa dia miasa mba hamorona antibody manokana izay hampidirina amin'ny antigen-tanjona. Ny antikôlôjia dia hampiaraka amin'ny antigène mifanandrify toy ny fanalahidy iray ho an'ny fanidiana. Io teknolojia io dia mamela ny fitsaboana hamaritana sela voafaritra, ka mahatonga ny sela salama ho tsy salama. Ny fitsaboana antibody monoclonal dia tsy azo atao afa-tsy amin'ireo kansera izay ahitana ny antigène (sy ny antikoly tsirairay).
Ny Trastuzumab dia miasa amin'ny alàlan'ny fikendrena ny HER2 / neu receptor amin'ny sela homamiadana. Ny gn HER2 dia mamorona sela proteinina eo amin'ny tontolon'ny sela izay mampiakatra ny fitomboan'ny sela rehefa miresaka ny sela mba hizara sy hampitombo. Ny sela sasany misy kansera dia manana HER2 (HER2 / neu overexpression), mahatonga ny sela hizara sy hampitombo haingana be. Ny Trastuzumab (180288-69-1) dia manendry ny mpitsabo HER2 mba hisorohana ny sela tsy hihabetsaka, ny fisorohana ny fivoaran'ny homamiadana bebe kokoa sy ny fampihenana ny fivoaran'ny homamiadana. Mety miasa koa izy amin'ny fanentanana ny hery fiarovan-tena.
Ahoana no hividianana Trastuzumab avy any AASraw